Lakkoofsi namoota Ameerikaa irraa gara Kanaadaatti baqatanii dachaa Afuriin dabaluun gabaafame. - NuuralHudaa
Miseensonni Kora Waliigalaa Mana Marii Dhimmoota Islaamummaa seensa baatii Kabajamaa Ramadaanaa ilaalchisuun ibsa baasan
konfiransiin Du`aatotaa fi Imaamman Oromiyaa ibsa Ijjannoo qabxii 10 qabu baasuun golabame
Hoggantoota Mana marii dhiimmoota Islaamummaa Naannoo Somaaleetif leenjiin hubannoo hoggansaa cimsu keenname
Lakkoofsi namoota Ameerikaa irraa gara Kanaadaatti baqatanii dachaa Afuriin dabaluun gabaafame.
Jalqaba ji’a Adoolessaa irraa kaasee torbee lama keessatti godaantonni Ameerikaa keessa jiraataa turan 3,800 ol, karaa seeraan alaatiin daangaa Kanaadaa qaxxaamuruun kutaa Kubeek kan seenan yoo tahu, lakkoofsi godaantota ji’a kana keessa kolugaltummaa gaafatanii kun kan duraanii caalaa dachaa afuriin kan dabale tahuu odeeyfannoon BBC irraa argame ni addeessa.
Qondaaltonni dhimma godaantota Kanaadaa gama isaaniitiin; daangaa Kanaadaa seenuun qofti koolugaltummaa kan hin keennisiisne tahu hubatu qabu jechuun akeekachiisan. Adeemsa dhimma godaansa mootummaa Kanadaa ilaalchisee, Odeeyfannoon dharaa miidiyaalee hawaasaa irratti lakkifamaa jiru, lakkoofsi godaantotaa akka dabaluu godhaa jiraatu ibsuun, mootummaan odeeyfannoo dharaa kana dhaabsisuuf yaalaa jiraatuun gabaafameera.
Namoonni yeroo ammaa kana Ameerikaa irraa gara Kanadaa godaanaa jiran kun, irra hedduun isaanii namoota balaa kirkira lafaa bara 2010 keessa Hayitii keessatti muudateen walqabatee karaa seera qabeessa taheen Ameerikaa keessa jiraataa turan yoo ta’u, labsii pirezedaantiin Ameerikaa Donald Tiraamp ji’a caamsaa keessa labseen, hayyamni jireenyaa yeroo murtaa’eef godaantota kanneeniif kennamee ture, Fulbaana 2018 wan dhumuuf akka biyyattii lakkisanii bahan jechuun isaa gabaafameera.
Mootummaan Kanaadaa hanga bara 2016ti lammiilee Hayitii koolugaltummaa gaafatan keessaa 50℅ kan tahaniif hayyamuun; kan hafan gara biyya isaaniitti deebise. Yeroo ammaa kana immoo godaantota kana Iddoo tokkotti walitti qabuun hanga dhimmi isaanii ilaalamee murtii argatutti daangaa irratti dhoorkaa jiraatuu odeeyfannoon kun ni mul’isa.
Ministeerri Geejjiba Federaala Kanaadaa Mark Garni’awu
“Daangaa Saint-Bernard-de- Lacolle irratti sochiin godaantotaa humna mootummaatii ol tahuu irraan kan kahe to’achuu hin dandeenye jedhe.
Yeroo Fulbaana 1/2017 hanga Adoolessa darbee jiru keessatti namoonni 7,500 ol karaa seeraan alaatiin Kanaadaa seenuun koolugaltummaa kan gaafatan yoo ta’u, isaan jidduu 6,360 kutaa Kubeekitti tahuus gabaasni kun ni mul’isa..
gafn koo yatimni zaka ni baasa
April 18, 2021 sa;aa 9:17 am Update tahe
Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota Covid-19’n du’anii miiliyoona said dabruu ibsame
Soomanni gaachena ta’ee badii irraa nama tiksa
Bara dheengaddaa jaallan waliin soommanaa baane meeqa if biraa dhabne?
Gorsa Haakimaa:Yeeroo Ifxaaraa Soomana akkamitti furuu qabna?
Haaji Shunii Anshoo gara ganda aakhiraa godaanan